Xakamaynta Hacked ee goobaha WordPress - Khudbaddii Khudbada ah ee ku saabsan dhacdooyinka New Spam
Ugu dambeyntii, waxaa jiray warar ku saabsan dhacdooyinka spam SEO, taas oo ku lug leh rakibaadda content xaasidnimo iyo subdirectories on bogagga WordPress. Spammers iyo jayliyeyaashu waxay isticmaalaan istaraatiijiga madow ee SEO ah ee loogu talagalay in lagu xadgudbo khayraadka sunta iyo kaydinta. Waxay kudhifaan content spam on WordPress aadna dhaqaajiso subinectories xaasidnimo ah si loo faafiyo bogaggaaga internetka.
Alexander Peresunko, oo ah xirfadle sare oo ka socda Semt , ayaa halkan ku sharraxaya arrimo wax ku ool ah oo ku saabsan arrintan
Website-yada spam waxay kor u qaadaan alaabada iyo adeegyada si joogto ah. Tusaale ahaan, goobo badan oo spam ah ayaa waxay kobcinayaan muraayadaha qoraxda iyo alaabada naqshadeeye, soo jiidashada dadka barnaamijyada dakhliga ee ku xiran kuwa lagu xakameynayo hackers. Farsamadani waa laga goosanayaa barnaamijyada kale ee jabhada ah sababta oo ah waxay u rogeysaa isticmaalayaasha inay isku xirnaadaan iyo kuwo xaasidnimo leh - sobivus test my speed. Waxay burburin kartaa muuqaalkooda goobta waxayna ku xiri karaan macluumaadka kaararka deynta internetka.
Hackers iyo spammers waxay daboolaan khiyaamooyinka iyaga oo qarinaya shabakadaha spam gudaha hoose ee goobaha sharci ahaanta ah, wax walbana waxa ka mid ah in dadka websaydhka ama mulkiilayaasha goobahaasi aanay ogaan. Waqtigaas, waxay noqotey lagama maarmaan in la ilaaliyo amniga website-kaaga oo wax ka bedelay xisaabaadka WordPress. Waxaad isticmaali kartaa Raadinta Shirkadda Google si aad u ogaato haddii weeraryahannadu ay is-casilayaan boggaaga. Khabiirada Cimilada waxay kugula talinayaan qalabkan macaamiishooda kuwaas oo doonaya in ay kor u qaadaan tayada gaadiidka webka. Haddii aad aragto arrimo badan oo ku saabsan sanduuqa faallooyinka boggaaga, waxaa jira fursado ah in aad tahay dhibane hackka SEO ah. Nasiib darro, ma jirto wax lagu ogaanayo dhibaatadan, waxaadna u baahan doontaa in aad sameyso bog internet ah oo dhan.
Waa inaadan weligaa kaa xayirin shabakadaha khatarta ah waxayna isticmaalaan siyaabo kala duwan si loo hubiyo ilaalintaada iyo badbaadadaada internetka. Xaaladaha intooda badan, spamers waxay weerari karaan boggagaaga iyada oo la adeegsanayo qoraallada albaabada ah iyo irbadaha isbaarada, oo ay adag tahay in la ogaado. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo dhowr ah oo looga hortagi karo hindise-bixiyeyaasha in ay ku dhuumataan codkooda ku yaalla boggaga saxda ah ee WordPress.
Baaritaanka spam, oo loo yaqaano ilaha serverka, ayaa loo isticmaalaa in lagu falanqeeyo kiisaska ay jabhaduhu weerarto shabakadahaaga si ay uga faa'iideystaan ​​xeeladahaaga SEO. Waxaa intaa dheer, waxay ka faa'iidaystaan ​​farsamooyinka cad ee SEO-ka ee aad isticmaashay si loogu darajeeyo website-kaaga natiijooyinka raadinta . Si ka duwan sida loo jihaynayo xaasidnimada, nooca spam ma beddeli karo muuqaalka iyo muuqaalka bogga infekshanka.